အရည်အသွေးမြင့် စိတ်တိုင်းကျ စိတ်ကြိုက်ပုံနှိပ် Logo White Matte Art Paper Shopping Gift Black Paper Bag စက်ရုံနှင့် ထုတ်လုပ်သူ | လန်းဟိုင်း
စိတ်တိုင်းကျ စိတ်ကြိုက်ရိုက်နှိပ်ထားသော လိုဂို အဖြူရောင် Matte Art Paper Shopping Black Paper Bag လက်ဆောင်
ကုန်ပစ္စည်းအမည်- စိတ်တိုင်းကျ စိတ်ကြိုက်ရိုက်နှိပ်ထားသော လိုဂို အဖြူရောင် Matte Art Paper Shopping Gift အနက်ရောင် စက္ကူအိတ်
အနုပညာမွမ်းမံထားသော စက္ကူ (140,170,190,210,250 ဂရမ်)
အရွယ်အစား- 25*30*12cm/ စိတ်ကြိုက်အရွယ်အစား
ထုတ်ကုန်အမည် စိတ်တိုင်းကျ စိတ်ကြိုက်ရိုက်နှိပ်ထားသော လိုဂို အဖြူရောင် Matte Art Paper Shopping Black Paper Bag လက်ဆောင်
ပစ္စည်း အနုပညာမွမ်းမံထားသော စက္ကူ (140,170,190,210,250 ဂရမ်)Kraft paper (100,120,130,140,170,180,200,250 gsm)
အရွယ်အစား 25*30*12cm/ စိတ်ကြိုက်အရွယ်အစား
ကိုင်တွယ်ပါ။ စက္ကူလက်ကိုင် / ကြိုးလက်ကိုင် / ဖဲကြိုးလက်ကိုင် / စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ထားသည်။
ပုံနှိပ်ခြင်း။ CMYK4ရောင်စုံ အော့ဖ်ဆက်ပုံနှိပ်ခြင်း၊ မျက်နှာပြင်ပုံနှိပ်ခြင်း၊ Panton အရောင်၊ UV ပုံနှိပ်ခြင်း စသည်တို့။
မျက်နှာပြင် အလှဆင်ခြင်း။ ခရမ်းလွန်ရောင်ခြယ်ခြင်း၊ အစက်အပြောက်အရောင်တင်ခြင်း၊ ဖောင်းကြွခြင်း၊ အရောင်တောက်ခြင်း/ဖျော့ခြင်း၊ သတ္တုပြားတံဆိပ်ရိုက်ခြင်း၊ သေဆုံးဖြတ်တောက်ခြင်း စသည်တို့
အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု အဆင့်မြင့်စက်ပစ္စည်းများနှင့် အတွေ့အကြုံရှိ QC အဖွဲ့သည် ပစ္စည်း၊ တစ်ပိုင်းကုန်ချောနှင့် အချောထည်ပစ္စည်းများကို ပို့ဆောင်ခြင်းမပြုမီ အဆင့်တိုင်းတွင် တင်းကြပ်စွာ စစ်ဆေးမည်ဖြစ်သည်။
အသုံးပြုမှု ပရိုမိုးရှင်း၊ ဈေးဝယ်၊ လက်ဆောင်၊ ကုန်ခြောက်၊ လက်လီရောင်းကုန်၊ ယူသွားလိုက်၊ အဝတ်အစားထုပ်ပိုးခြင်းအတွက် တွင်ကျယ်စွာ အသုံးပြုသည်။
ရှန်ဟိုင်း၊ ရှန်ဟိုင်း၊ နင်းဘို၊ ကွမ်ကျိုး၊ ချင်ဒေါင်း
50% Product Fee+100%Plates Fee ကိုကြိုတင်ပေးချေရမည်ဖြစ်ပြီး လက်ကျန်ငွေကို ပို့ဆောင်ခြင်းမပြုမီ ပေးချေရပါမည်။
တစ်လလျှင် 60000 ကျပ် စိတ်ကြိုက်ပုံနှိပ်ပါ။
OPP အိတ်တွင်ထုပ်ပိုးထားသော 200 အပိုင်းပိုင်းအိတ်တစ်ပုံးတွင်ထုပ်ပိုးထားသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ရည်ရွယ်ချက်မှာ အရည်အသွေး၊ စိတ်ရင်းမှန်ဖြင့် ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဝန်ဆောင်မှုနှင့် ယှဉ်ပြိုင်နိုင်သောစျေးနှုန်းများသေချာစေရန်ဖြစ်သည်။ Takeaway ထုပ်ပိုးခြင်းအတွက် တစ်နေရာတည်းတွင် စျေးဝယ်ခြင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များသည် သင့်အတွက်ထိုက်တန်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် OEM နှင့် ODM ကိုလက်ခံပါသည်။ ကျေးဇူးပြု၍ သင့်ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများ၊ ဒီဇိုင်း၊ အရွယ်အစား၊ အရေအတွက်၊ အရောင်စသည်တို့ကို အသေးစိတ်တောင်းဆိုချက်ကို ပေးပို့ပါ။
ကုန်ပစ္စည်းတင်သွင်းခြင်းမှ ထုတ်လုပ်ခြင်းအထိ ထုတ်ကုန်အရည်အသွေးနှင့် လုံခြုံမှုကို ကျွန်ုပ်တို့တန်ဖိုးထားပြီး၊ ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ထုံးလုပ်နည်းအားလုံးသည် နိုင်ငံတကာစံနှုန်းအတိုင်း အတိအကျလိုက်နာပါသည်။
စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ၊ ထုတ်ကုန်အားလုံး FDA ၏လိုအပ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီကြောင်းအာမခံသည်။ အကယ်၍ သင်သည် ပစ္စည်းများ တင်သွင်းခြင်း မပြုခဲ့လျှင် သို့မဟုတ် ယခင်က တရုတ်နိုင်ငံမှ တင်သွင်းခြင်း မပြုခဲ့လျှင်။
ကျေးဇူးပြု၍ ပြောပြပါ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအားလုံးတွင် သင့်အား ကူညီဆောင်ရွက်ပေးပါမည်။
သင်၏ LOGO လုပ်ငန်းစဉ်ဖြင့် စိတ်ကြိုက်ထုတ်ကုန်များ
1. ကျေးဇူးပြု၍ အရေအတွက်၊ အရွယ်အစား၊ ဒီဇိုင်း (PDF သို့မဟုတ် AI တွင်လိုဂို) ကို အကြံပေးပါ။
2. ကျေးဇူးပြု၍ ငွေပေးချေမှုလင့်ခ်ကိုပြုလုပ်ရန် ပို့ဆောင်ရေးလိပ်စာ၊ ဖုန်းနံပါတ်ကို ပေးပါ။
3. ငွေပေးချေပြီးနောက် သင်၏အတည်ပြုချက်အတွက် ဒီဇိုင်းဂရပ်ဖစ်ကို လုပ်ဆောင်မည်ဖြစ်ပြီး အော်ဒါစတင်ပါ။
4. အော်ဒါပြီးဆုံးသောအခါ ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီး ပို့ဆောင်ပေးပါမည်။
5. ပေးပို့ပြီးနောက်၊ သင်ပေးပို့မှုကို လက်ခံရရှိသည်အထိ ကျွန်ုပ်တို့သည် ပေးပို့မှုကို ခြေရာခံပါမည်။
6. ပစ္စည်းလက်ခံရရှိပြီးနောက် ပြဿနာတစ်စုံတစ်ရာတွေ့ရှိပါက၊ ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်တို့ထံ ဆက်သွယ်ပါ၊ သင့်အတွက် ကောင်းမွန်သောစျေးဝယ်အတွေ့အကြုံကို ပေးဆောင်ရန် အချိန်မီဖြေရှင်းပေးပါမည်။
1. ကျွန်ုပ်တို့သည် ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အိတ်ထုတ်လုပ်သူများဖြစ်သည်။
4. ထုတ်လုပ်မှုနှင့်နိုင်ငံခြားကုန်သွယ်မှုအတွေ့အကြုံ 16 နှစ်ကျော်
5. ကျွမ်းကျင်သောဝန်ထမ်းများနှင့် ထိရောက်သောစီမံခန့်ခွဲမှုများသည် ကောင်းမွန်သောအရည်အသွေးနှင့် လျင်မြန်စွာပေးပို့ခြင်းကိုသေချာစေသည်။
1. စက္ကူအိတ်၊ PVC အိတ်၊ အထည်အိတ်၊ စျေးဝယ်အိတ်၊ kraft အိတ်၊ လက်ဆောင်အိတ်၊ ထုပ်ပိုးအိတ်စသည်ဖြင့်
2. သင်သည် ထုတ်လုပ်သူတစ်ဦးလား။
3. နမူနာကို မည်သို့ရယူရမည်နည်း။
1. အခမဲ့နမူနာကို ပေးဆောင်နိုင်သော်လည်း ကုန်စည်ပို့ဆောင်ခ ကောက်ခံပါသည်။
2. နမူနာပြုလုပ်ခြင်းသည် ဖောက်သည်၏တောင်းဆိုချက်အရ ကျေနပ်နိုင်ပါသည်။ နှင့် နမူနာကုန်ကျစရိတ်သည် ဖန်တီးမှုလုပ်ငန်းစဉ်အပေါ် မူတည်ပါသည်။
3. မှာယူမှု QTY သည် 1000pcs ထက်ပိုပါက နမူနာအခကြေးငွေကို ပြန်အမ်းနိုင်သည်။
4. အော်ဒါတစ်ခုစတင်လိုပါက သင့်အား ဘာကမ်းလှမ်းရမည်နည်း။
1. ကျေးဇူးပြု၍ ထုတ်ကုန်အရွယ်အစား- LxWxH in cm.
2. စက္ကူပစ္စည်း- စက္ကူ၏အထူ & gsm (တစ်စတုရန်းမီတာလျှင်ဂရမ်) (ဥပမာ- အထူ 0.42mm၊ အလေးချိန်- 350gsm C2S)။
3. Artwork ဖိုင်ကို AI / EPS/ CDR/ PDF / JPG ဖြင့် CMYK အရောင်ပုံနှိပ်ခြင်းအောက်တွင် ဖန်တီးရပါမည်။
4. မူပိုင်ခွင့်အမှတ်တံဆိပ်၏ခွင့်ပြုချက်- မူပိုင်ခွင့်လိုအပ်သောထုတ်ကုန်များအတွက်၊ အမှတ်တံဆိပ်ကိုင်ဆောင်သူထံမှ ခွင့်ပြုချက်ရရှိရန် ကျေးဇူးပြု၍ ကျေးဇူးပြု၍ပေးပို့ပါ။
5. ကျွန်ုပ်တို့ မည်သို့ ပေးဆပ်နိုင်သနည်း။
1. 30% ကြိုတင်ငွေပေးချေမှု၊ 70% လက်ကျန်ငွေပေးချေမှု။
2. ကျွန်ုပ်တို့သည် T/T.Western Union, L/C.Paypal ကို လက်ခံပါသည်။
3. သွင်းကုန်ခွန်၊ အခွန်နှင့် အခကြေးငွေများသည် ပစ္စည်းစျေးနှုန်း သို့မဟုတ် ပို့ဆောင်ခများတွင် မပါဝင်ပါ။
ယခင်- အမှတ်တံဆိပ်လိုဂို လက်ဆောင်တံဆိပ်ပါ ဇိမ်ခံကားချပ် စက္ကူလက်ဆောင် စျေးဝယ်အိတ်
နောက်တစ်ခု: စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်ထားသော ဇိမ်ခံဆိုင် လက်ဆောင်အိတ်ထုပ်ပိုးမှု စိတ်ကြိုက်စက္ကူ ကျေးဇူးတင်ကြောင်း လိုဂိုပုံနှိပ်ထားသော လက်ဆောင်အိတ်
Pvc Gift Bag ကိုရှင်းလင်းပါ။
Jute Mini လက်ဆောင်အိတ်
စိတ်ကြိုက် ဇိမ်ခံပစ္စည်း လက်ဆောင်အိတ်ထုပ်ပိုးမှု...